Worktop - ဆိုမီးဖိုချောင်ယူနစ်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအဖြစ်ကောင်းစွာစားပွဲထိပ်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်, တစ်ခုလုံးပုံးမီးဖိုချောင်ပရိဘောဂဖုံးလွှမ်း။ ပလပ်စတစ်, သတ္တု, သဘာဝနှင့်အတုကျောက်သစ်သားနှင့်အခြားသူများ: ကောင်တာများဖုံးအုပ်အများဆုံးကွဲပြားခြားနားနေပေမည်။
ပလတ်စတစ်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူ chipboard လုပ်ထားတဲ့ worktop စဉ်းစားဈေးအပေါဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ။ အရည်အသွေး worktop အကွာအဝေး 36-38 မီလီမီတာတစ်ဦးအထူရှိပါတယ်။ ပလပ်စတစ် worktop မျက်နှာပြင် Matt သို့မဟုတ်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်နိုင်သည်။
အလွန်အကြမ်းခံပစ္စည်းများနှင့်ဖုံးလွှမ်းသောရေကိုခံနိုင်ရည် chipboard, အသုံးပြု. ရေချိုးခန်းထဲမှာပလပ်စတစ်ကောင်တာများအဘို့။ ထိုသို့သော tabletop မအပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများအားမျှမစိုထိုင်းဆကြောက်ရွံ့။ worktops ပိတျထားသောအဆစ်အတွက်အစိုဓာတ်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့နောက်ထပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖြစ်ရေပစ္စည်းနှင့်အဆက်အသွယ်ကိုရှောင်ရာမှအထူးဖွဲ့စည်းမှုလျှောက်ထားခဲ့သည်။
အပူချိန်အတက်အကျနှင့်မြင့်မားသောဖိအားအကြမ်းခံပလတ်စတစ်အဖို့ခံနိုင်ရည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပလပ်စတစ်အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူမီးဖိုချောင် worktop ။ ဒါဟာသိသိသာသာသူတို့ရဲ့သက်တမ်းကိုတိုးချဲ့။ ပလတ်စတစ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူတစ်ဦးကစားပွဲ, ဝတ်ဆင်ရန်မြင့်မားသောခုခံရှိပါတယ်နေရောင်ထဲမှာလည်းညှိုးနွမ်းမည်မဟုတ်, လေထုညစ်ညမ်းမှု, တကသမားရိုးကျဆပ်ပြာနှင့်အတူဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ပွန်းစားမှုန်တစ်ပလပ်စတစ်ထိပ်တန်းနှင့်အတူစားပွဲ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်အသုံးပြုမရသင့်တယ်။
ပလပ်စတစ်ကောင်တာများအရိပ်နဲ့အရောင်များ၏ကျယ်ပြန့အတွက်တင်ပြနေကြပါတယ်။ မည်သည့်မီးဖိုချောင်၏အတွင်းပိုင်းမှာတော့အဖြူရောင်ပလပ်စတစ် tabletop ရှာဖွေနေကြော့ဖြစ်ပါတယ်။ Noble Weng အရောင် စားပွဲပေါ်မှာပေါ်တွင်သင်၏မီးဖိုချောင်မူရင်းကိုငါပေးမည်။ တစ်ဦးကရေချိုးခန်းစကျင်ကျောက်, ရှဟံသို့မဟုတ် malachite တူသောကြည့်ဖို့အလှဆင်ပိုမိုသင့်လျော်သောကောင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Form ကိုပလပ်စတစ်ထိပ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်: ပတ်ပတ်လည်, စတုဂံ, ဘဲဥပုံသို့မဟုတ်ပင်အနား။
ရေချိုးခန်းအဘို့အ Glass ကိုစင်ပေါ်
လက်ဝဲအထက် quadrant အတွက်နာကျင်မှု - အကြောင်းရင်းများ
ဆီနှင့်အဝတ်ကိုလျှော်ဖို့ကိုဘယ်လို - ထည်အမျိုးမျိုးများအတွက်အကောင်းဆုံး tools တွေ
အဆိုပါ parquet ကော်ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဝလွန်အမျိုးသမီးများ Sundresses - အလှဆုံးနဲ့စတိုင်
Euphorbia ပါးလာအီတလီဘောလုံး - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
Caesarean section မှာ Epidural မေ့ဆေး